Doorashooyinka UK/2017: Muxaafidka oo horreeya laakiin aqlabiyad ku filan an haysan – Kasmo Newspaper
Doorashooyinka UK/2017: Muxaafidka oo horreeya laakiin aqlabiyad ku filan an haysan
Updated - June 8, 2017 11:55 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Britain waxaa subaxnimadii Khamiista loo dareeray doorashooyin, markii 3aad, muddo 2 sano gudahood ah, iyada oo doorashooyinkii May 2015 iyo midda hadda, 8da Juun ay u dhexaysay Aftidii Brexit ee taariikhiga ahayd, 23kii Juun 2016kii.
Dad gaaraya 45,7 malyuun ayaa codadkooda ka dhiibtay England, Scotland, Wales iyo North Ireland, si ay uga xushaan musharrixiin gaaraysa 3,500 ciddii u matali lahayd Barlamaanka Westminster oo 650 kursi ah oo badankoodu aadi doona 2da xisbi, Labourka iyo Muxaafidka oo si aad ah isugu dhowaa.
Iyada oo dhowaan ay soo xirmeen goobihii codbixinta, shabakadaha waaweyn ee dalka waxay isku raacsanyihiin 1 saadaal (Exit Poll) oo ay sameeyeen Shirkadaha Ipsos Mori iyo Gjk, kuwaas oo tilaamaya in Theresa May in yar ka horreyso Jeremy Corbyn, laakiin ayan gaarin aqlabiyaddii Barlamaanka.
Xisbiga Coservative-ka (Midig-dhexe) ayaa la filayaa in uu helo 314, tiradaas oo ka hooseysa 12 aqlabiyaddii looga baahnaa si ay xukuumad u soo dhisaan, waxayna u tahay xisbiga Theresa May jab, kaas oo bilowgii ololaha doorashada la qiyaasayay in uu si aad ah u horreeyo, laakiin hoos uga dhacay 17 dhibcood, halkii xilligii David cameron uu joogay 2015kii.
Marka laga reebo Labourka oo qiyaasha helay (266), Xisbiyada kale ee macnaha leh kana dhex muuqda tartanka waxay kala yihiin isla markaasna kala heleen: Liberal Democrats (bidix-dhexe , 14), SNP (waddaniga Scotland, 34) UKIP (midigta fog 0) , iyo Others oo helay (22).
Durbadiiba qiimaha Giniga Istarliinka ayaa lumiyay 2%, (heerkii ugu hooseeyay ilaa bishii Oktobar), markii uu soo baxay warka saadaasha guuldarrada Xisbiga Muxaafidka, iyada oo suuqyada sarrifka Dollarku noqday 1,26, halka lacagta Yurub ee Euro iyaduna lagu sarrifayo 0,88.
Xisbiga talada haya ee Muxaafidka waxaa hoggaaminaysa R/Wasaare Theresa May, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha, taas oo jagada ka dhaxashay David Cameron, jabkii Aftidii Brexit ka dib. Waa haweeneydii 2aad oo taariikhda Britain hoggaamisa xukuumad, waxaana ka horreysay Margaret Thatcher (1979–1990), oo isla xisbiga Muxaafidka ahayd.
Doorashooyinka waxaa 18kii April codsatay R/Wasaaraha qudheeda iyada oo, sida Dastuurku qabo, oggolaanshaha Barlamaanka heshay 4 casho ka dib, 22kii April. Ujeeddadii ay ka lahayd waxay ahayd in ay hesho awood ay kula gorgortanto Midowga Yurub geeddi-socodka Brexit ee ka –bixitaanka, kaas oo rasmi ahaan bilaaban doona 19ka Juun 2017ka.
Xisbiga Labourka ee shaqaalaha waxaa hoggaaminaya Jeremy Corbyn, ruug-caddaa hantiwadaag ah siyasaddana ku soo jiro 30 sano, kaas oo shacbiyad ballaaran ka haysta dhallinyarada.
Natiijooyinka kama dambaysta ah waxay soo bixi doonaan saacadaha soo socda ee Jimcaha 9ka Juun, in kasta oo Muxaafidku u muuqdo xisbiga ugu ballaaran haddii uu aqlabiyad buuxda waayo waxay ka dhigantahay in uu ku jabay doorashooyinkii.